Google na -eji kaadị kaadị emegharị ngwa Wear OS Androidsis
Wear OS bụ sistemụ ọhụrụ maka smartwatches, nke Google malitere n'afọ gara aga. Ruo ugbu a, ọganiihu ya n'ahịa adịla nwayọ. N'ihe banyere United States, ha anaghị anọchite anya 10% nke ahịa. Mana ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-arụ ọrụ iji meziwanye sistemụ arụmọrụ a. Ugbu a, a na-ewebata ọhụụ ọhụrụ na ya. Ọ bụ ihe abụọ nnukwu interface mgbanwe nke ahụ rutere nanị ihe karịrị otu afọ.
N'oge a, anyị na-ahụ interface na taịl nile ma ọ bụ kaadị. Ebumnuche ya bụ ime ka Wear OS dịkwuo mfe maka ndị na-eri ihe. Na mgbakwunye, mmegharị njegharị dịkwa mkpa na nke a.
Iwebata Tiles ma ọ bụ kaadị ndị a bụ mma ikewapụ akụkụ nke interface na-egosi anyị dị iche iche ozi. Ya mere, na a ogbugbu anyị nwere ike ịnyagharịa n'etiti ndị a kaadị na Wear OS. Iji nwee ike ịkwaga, naanị ị ga-eji mpịgharị ngosipụta gafee ihuenyo ahụ. Google weputara mkpokọta kaadi isii.
Maka ugbu a, kaadị isii anyị hụrụ bụ: Ihe Mgbaru Ọsọ, Omume na-esote, Oge, Obi, Isi akụkọ na Oge. O yighị ka ha ga-edozi maka ya, ọbụlagodi ugbu a. Yabụ ndị a bụ ngalaba ọhụụ ndị ọrụ nwere ike ịchọta na elele ha.
Agbanyeghị na Google ga - enye ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ejiji Wear OS ọhụrụ a na Google I / O 2019, nke ahụ ga-ebido n’izuụka ọzọ. Mgbe mwepụta nke interface a, ekwuola na ọ ga-eme n'ọnwa na-abịa. Ya mere, na June a ga-emepụta atụmatụ a na ụwa na nche.
Mgbanwe na-achọ ịkwalite Wear OS na ahịa. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị ọrụ na-enweta n'ụzọ dị mma. Anyị ga-anọ na nche maka ihe omume na Google I / O 2019, ebe enwere ike ịkpọsa ozi ndị ọzọ maka sistemụ elekere. Kedu ihe ị chere gbasara mgbanwe ndị a na interface ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Google na-emelite Wear OS interface
Facebook maka gam akporo bu ihe ohuru ohuru